ချစ်ခြင်းကို မခွဲပါနဲ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ချစ်ခြင်းကို မခွဲပါနဲ့…
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Jul 17, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 27 comments
ချစ်ခြင်းကို မခွဲပါနဲ့ …
ဟင့်အင်း မေမေ… သမီး သူနဲ့ မခွဲနိုင်လို့ပါ….
တောင်းပန်တိုးလျှိုးသော လေသံဖျော့ဖျော့နှင့် မေ့မေ့ကို ကျွန်မ အသနားခံလိုက်သည်။
မေ့မေ့မျက်နှာတွင်တော့ သမီးကို စိုးရိမ်သော မေတ္တာတရားနှင့်အလျှော့ပေးမည့်ပုံမပေါ်သော ခက်ထန်မှုတို့က ရောယှက်နေ၏။ သက်ပြင်းချသံနှင့်အတူတူ မေမေကလည်း ကြင်နာစွာ စကားဆိုလာလေသည်။
သမီးရယ်.. အဓိကကတော့ စိတ်ပါပဲ….. တခြားအရာတွေကို မေမေ အကုန်အလိုလိုက်ခဲ့တာပဲ… အခုဟာက သမီးအတွက် ထိခိုက်မှာမို့လို့ မေမေ တားနေရတာလေ…. အခုအချိန်မှာ မသိသေးပေမယ့် နောက်ကျရင် သူ့ကြောင့် သမီးပဲ ဒုက္ခရောက်ရမှာ…။
သူနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖြစ်လာသမျှကို သမီး ခါးစည်းခံပါ့မယ် မေမေရယ်… အခုအချိန်မှာတော့ သူနဲ့ခွဲဖို့ဆိုတာ သမီးအတွက် မဖြစ်နိုင်သေးလို့ပါ….. နောင်တစ်ချိန် သူမကောင်းဘူးဆိုတာ သမီးသိလာခဲ့ရင် သမီးကိုယ်တိုင် သူနဲ့လမ်းခွဲပါ့မယ်… သမီးအကြောင်းကို မေမေသိနေတာပဲလေ.. နော်… မေမေ့သမီးက စိတ်ခိုင်ပါတယ်။
ဒီမယ် မိမွန်မွန်… ငါ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ နင့်ကို ကောင်းကောင်းပြောနေတာ မရဘူးလား ဟမ်…. ဒီအရွယ်ကြီးကျမှ ရိုက်နှက်မဆုံးမချင်ဘူးနော်…တစ်ချိန်လုံး မိဘစကားကို နားထောင်လာပြီး အခုက ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ…. နောင် ဆိုတာ မပြောနဲ့… အခုကတည်းက သူ့ကြောင့် နင့်မှာ ရောဂါတွေ တက်နေရတာလေ… ငါ ဘေးကနေပြီး စိတ်ချမ်းသာတယ် ထင်နေလား….
ဟုတ်တယ်လေ… သမီးလည်း တစ်သက်လုံး မိဘစကားကိုနားထောင်ခဲ့တာပဲ… တခါတလေလေး ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာ လုပ်ပါရစေ.. အခု သမီးလုပ်တဲ့ကိစ္စကလည်း မေမေတို့ကို ထိခိုက်နေလို့လား…သမီးဖြစ်ရင် သမီးခံမယ် မေမေဝင်ပြောစရာမလိုဘူး….
ဘာ!…. နင်က ငါ့သမီးလေ.. ငါ့မှာ ဒါလေးတောင် ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလား… နင်က ငါ့ကို အခု အာခံနေတယ်ပေါ့.. အေး… နင် ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှတာ… တွေ့မယ်….
မေမေ့၏ခြေလှမ်းတို့က ကျွန်မအခန်းဆီသို့ ဦးတည်ပြေးသွားသည်။
မေမေ… မလုပ်ပါနဲ့ !!!
အော်သံနှင့်အတူ ကျွန်မ ပြေးလိုက်သွားသည်။ စိတ်ကြီးလှသော မေမေ၏ လျင်မြန်မှုကို ကျွန်မအနိုင်မယူနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်မနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ အခန်းထဲတွင် မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းတို့ကြောင့် ကျွန်မမျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားသည်။ ခုနက သွားခဲ့သော ဆေးခန်းက ဆရာဝန်၏ စကားသံကို ပြန်ကြားယောင်လာ၏။ နှလုံးအားနည်းခြင်း တဲ့။ ကျွန်မ၏ နှလုံးသားက ယခုမြင်ကွင်းကို ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ ကျွန်မနောက်ဆုံးသိလိုက်တာက ခွေလျက်ကျသွားသော ကျွန်မ၏ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မေမေဆီက ‘သမီး’ ဟူသော ခေါ်သံ။
ကျွန်မမျက်လုံးထဲမှာတော့ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပြန့်ကျဲနေသော ကျွန်မချစ်ရသည့် ကော်ဖီပုလင်းလေးများ…. ။ ။
ချစ်ခြင်းကို မခွဲပါနဲ့ ..
ချစ်ခြင်းကို မခွဲကြပါနဲ့ ..
တကယ်နှလုံးသားစက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး … သေရာပါအောင်မလုပ်နဲ့ ..
မေမေက နိုး ဆိုတာနဲ့ အားလုံး တိကနဲ ဖြတ်ခဲ့တာချည်းပါပဲကွယ် … ;)
မာမီ က Yes တော့ ဝေက No ပြန်ရောလား။ :-))
သများ ဦးလေးတွေ သများ အခန်းထဲ က ဒွေး ဝေါရှိတွေ ဆွဲခွါတုန်းကလည်း ဂလိုပဲ ခံစားရတယ်။
သများလည်း ဖြိုးငွေစိုးပုံတွေကို အိုက်လို ကပ်ထားဖူးတယ်။ ဟိ သူနဲ့တူတဲ့ကောင်လေးနဲ့ ဆုံဖူးတာကိုး ခိခိ
တောက်စ်… ကော်ဖီမှုန့်တစ်ပုလင်း ဘယ်လောက်ဆိုတာ မေမေကို ဆိုင်ခေါ်ပြီးပြလိုက်..
အဲ… မြန်တျန့်က ကော်ဖီမှုန့်ကတော့ ရှော့မရှိလောက်ဘူး…
အုန်းဆံမှုန့်ဆိုလား ဘာဆိုလား… ရောထားသတဲ့… ရင်တုန်မှာစိုးလို့တဲ့… ခွိစ်
အစက ဂိုးရို့စ်၊ နောက်တော့ ပရီးမီးယား၊ ခုတော့ နက်စ်နဲ့ပဲ ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ်။ အခြေအနေကောင်းရင်လည်း သူ့ထက်သာတာနဲ့ လက်တွဲချင် လက်တွဲဖြစ်မယ် ဟီး
ရင်တွေတောင် တုန်သွားတာပဲ၊ အခန်းထဲမှာများ ခြောက်ထောင့်တုံးကြီးများ မေမေများ မြင်သွားသလားလို့။
တော်ပါသေးရဲ့၊ ခြောက်ထောင့်တုံးကြီးအပြေးမြန်သွားလို့ ကော်ဖီပုလင်းတွေတိုက်မိပြီး ကွဲသွားတာပဲ မြင်သွားလို့သာပေါ့။
ဟီးဟီး ဟုတ်ပါ့နော်။ သူ့ကို အခန်းထဲထည့်ထားလိုက်ရမှာ။ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ။
အဲ့ဒီ နေရာမျိုးမှာဆို …
နောက်ကျတဲ့ ခြေထောက် သစ္စာဖောက်ပေါ့ …… ဟီးးဟီးး
အဲဒီအမျိုးသမီးကြီးနဲ့တူတယ် ဟိုနေ့က လမ်းထိပ်မှာ ခပ်ရွယ်ရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေတာတွေ့တယ်
” မင်း ချစ်သူကို မင်းဘဲကြည့်ထိန်းပါအုံး အန်တီတော့ ခဏခဏပြောလည်း မရဘူး သူမှသူတမ်းတမ်းစွဲ ဖြစ်နေတယ်လေ”
“ဗျာ ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ အန်တီ သူဆိုတာဘယ်သူလဲ ပြောပါအုံးအန်တီရယ် ကျွန်တော့ ဒူးတွေတောင် မခိုင်ချင်တော့ဘူး”
“ဟာ မင်းကလည်း တစ်မှောင့် သူဆိုတာ ကော်ဖီကို အစွဲကြီးနေတာပြောတာပါ”
“သြော် အဲဒါလား မပူပါနဲ့အန်တီရယ် တီဗွီကြော်ငြာထဲကလို ကော်ဖီခွက်ပုံစံတူဝယ်ထားလိုက်ပြီး အတူတူသောက်ပေးလိုက်ရင် စတိုင်တောင်ပိုကျသွားမှာပေါ့လေ”
“ဟေ မင်းကိုထိန်းခိုင်မှ ပိုဆိုးနေတော့တယ် ဒကထဲတော်”
တစ်နှစ်ပြည့်မှာ ကော်ဖီခွက်ဆင်တူဝယ်မယ်။ အကုန်အကျသက်သာတဲ့ အိုင်ဒီယာရပြီကွ။
ဆိုတဲ့ မဝေ ရဲ့ ကွန်းမန့် အတိုင်း လိုက်မလုပ်နဲ့နော် လုံမလေးရေ…။
အင်း…အံစာ…အံစာ…နင်တော့ ဒီလိုစကားလုံးတွေအောက်မှာပိပြီး ပြားပြားကြီးဖြစ်နေမှာ
ကော်ဖီကယ်ပေလို့ …နာ့ညီလေး ခြောက်ထောင့် ..ရိုက်စုတ်ခံရပြီမှတ်တာ..အဟေးဟေး….
မွန့်မွန့် နေရာကရော..မွန်မွန့် မိခင်နေရာကပါ…၀င်ခံစားမိပြီး..
ကိုယ့်​မှာ​တော့အဲ့လို တားမြစ်​မဲ့​မေ​မေမရှိ။ လုပ်​ချင်​ရာလုပ်​ဆိုပြီး လွတ်​ထား​ပေးသလိုပဲ။ သူ့သမီး အဖြစ်​မရှိမှန်းသိလို့ ရှာ​ပေးတယ်​တဲ့။ အဲ့ဒီရှာ​ပေးတဲ့သူ​ရော​မေ​မေ့ကို​ရော်​ ကပ်​ကပ်​လန်​​အောင်​ရန်​​တွေ့ပလိုက်​။ ​နောက်​အိမ်​မလာရဲ​တော့ဘူး။ ဟုတ်​​သေးဘူး လမ်းမှာ​တွေ့​တောင်​​ရှောင်​သွားတယ်​။ ဟဲဟဲ. အဲ့လိုချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့သမီးမို့….
ဇဂါးမစပ် ယုသန်ဒါတင် ကို ခြစ်တယ်ဗျာ…
ဖတ်ရတာ ရင်တုန်ပန်းတုန် ရှိလိုက်တာ………….
အင်း မှားပြန်ဦးတော့ မယ် မောင်သိကြား။
မာမီက ကော်ကော် နဲ့ အံအံ တစ်ခုဘဲ ရွေးရမယ်ဆို ဘာကို ရွေးမှာလဲ အရီးရဲ့ လုံမလေး။ :-)))
တကယ်များဖြစ်လာရင်တော့ ကော်ဖီတွေဆိုပြီးမသိဟန်ဆောင်နေမှဖြင့် ……